Obaba nomthelela abanawo kumadodakazi abo
Obaba badlala indima edingekile enqala emndenini.Banomthelela omkhulu ezinganeni zabo ,okugcina kuba ngumthelela esizweni sonkana. Njenge-ministry siya ngokuya sikhathazeka ngokushoda kobaba emndenini,nokuthi ukungabikho kobaba kuba nomthelela onjani esizweni sonkana.Sizokhuluma ngeqhaza elimqoka elidlalwa ngubaba kundodakazi wakhe.
UMKhrestu onongabazane olujulile ngensindiso Kwakhe
Elinye lamaqhinga aqavile esitha ukwehlisa isithunzi iZwi likaNkulunkulu bese sidlale incithakalo emqondweni wethu, silethe ungabazane nokwesaba ndlelazonke esingakuletha ngazo. NjengaMaKhrestu sidinga ukulazi leliqhinga qede simelane nalo siqinile.
Ukuthola ungoti wezemishado okhaliphe kakhulu
Uma kungukuthi ushadile, nebala usecebeni likaNkulunkulu alihlela emaphakadeni, ngisho kungathiwa kuba nezikhathi ezinzima kangakanani umshado wakho ,ukufanele ukufuzula kwakho ngamandla akho onke! Namhlanje ohlelweni Ezomndeni, sizoletha umhlandlela wokuthola ungoti wezemishado, uma kuya ngoba umshado wakho usumathubeni okuklayeka phakathi.
Ukusiza umngani ososizini lokulila
Kungabanzima kakhulu ukwazi ukuthi kuzomele ume kanjani esikhaleni sokusiza umngani wakho osekulileni kokushonelwa ngothandiweyo wakhe. Imvamisa asazi sibhekane kanjani nabantu abalilayo kumbe abesebuhlungwini obukhulu bemizwa yenhliziyo,okugcina sesiba namahloni sihlehle kulomsebenzi. Uma ufuna ukuba yilolohlobo lomuntu oluletha uhlobo olufanele lokuzwelana nomuntu ,nokunikeza umngani ithuba lokukhala, ngakho lalelisisa kahle ngoba la ohlelweni sizokhuluma ukuthi umsiza kanjani umngani olilayo.
Ukuhlakulela ubundawonye bomndeni
Uthi bewazi nje ukuthi izingane zithola injabulo enkulu ngisho ezintweni ezincane, nanjengokuba zijabulela nezinkulu futhi? Ngakho uma ukuqondile ukuhlakulela ubundawonye nezingane zakho, izinto ezifana nokudla isidlo sasekuseni nindawonye, imidlalo ukuziculela amaculo asamdlalwana nisemotweni noma nizihlalele, lokho kusengaphenduka kube yinto izingane zakho ezingasoze zayikhohlwa ekukhuleni kwazo.
Ngakube ngicwile ezinkambeni?
Kugcine sekukholakala ukuthi ukuze ube ngumcwili ophuzweni umelwe ukushona ngamadevu ophuzweni usuku nosuku. Kodwa lokho akusilo iqiniso neze. Kahle hle kuyenzeka ube ngocwile ezinkambani ngisho kwawena ungaziboni.
Ingcindezi nokuzibulala: Izimpawu nezexwayisayo
Uma kukhona omaziyo oseduze nawe onengcindezi, nakanjani umelwe ukulalela loluhlelo Ezomndeni lakhona namhlanje sizobe sixoxa ngamaphuzu ambeka engozini kunye nezimpawu ezexwayisayo ngengcindezi nokuzibulala.Ungabe usaya ndawo.
Ingane enekhanda eliqinile iveza umoya wokukulumana
Ukuqondisa imigilingwanyana yengane esencane kuwumqansa ngempela,singasayiphathi eyengane ebukeka ingezwa mshini. Abazali abaningi babhekana nobunzima ngezingane zabo ezincane, ngesikhathi zisafunda ukuphila nabantu futhi zibuke impilo ngokwazo ekuphaphameni kwengqondo.Okusifikela emqondweni njengamanje yingane eqhubeka iluma abantu okusuke kuluphawu lokuzilawula.Akekho umzali othokozela ukubona ingane yakhe iluma enye ingane noma umuntu kungekho cala, kodwa lokhu kuyakhula uma lenkambiso kungabhekwana nayo ngokushesha.
I-adoption nokwelapha i-Sensory Processing Disorder
Uma kungukuthi awukaze uzwe nge Sensory Processing Disorder ,kodwa umangele ngokuziphatha kwengane okungejwayelekile esesandleni sakho, ngakho lalelisisa. I-SPD ingachazwa ngokokuthi yisimo esiphathekayo sokungakwazi ukusebenzisa ukukhuluma okuze engqondweni ngokwemizwa, ukuze isebenze kahle kwimpilo yezinsuku zonke imvamisa lesisimo sidalwa wukwethuka okuhlasimulisayo eyabhekana nakho ingane isencane.
Ngakube umndeni wakho ngomunye wemindeni ekhonze ukuncokola kuqhume uhleko? Ngakube uzithola wenza ihlaya ngamanye amalungu omndeni ze wonke umuntu ahleke? Ukugcona abanye kungenza umndeni unamathelane. Nokho, uma kwenziwe ngendlela engalungile, ukugconana kungaholela odweshwini olukhulu emndenini.
Ukusondela kolahlekelwe ngothandiweyo wakhe ngokuzibulala
Ukuzibulala kwentsha kuphezulu njengokuba izithola ithe shi kwi-negative thinking futhi izithole kujikelezo lwengcindezo nemizwa yokungabi nathemba.Ohlelweni Ezomndeni namhlanje siza nokuthi ungasondela kanjani kumhlobo onosizi olahlekelwe ngothandiweyo wakhe ngokuzibulala.
Abazali abankamunkamu nomakoti nondodana
Ukugcina ubudlelwano nezingane zakho esezikhulile, kunye neziganene nabo kuhlale kungelula. Namuhla ohlelweni Ezomndeni sizokhuluma ngabazali osekunoqhekeko kundodana nomalokazana wabo futhi abangazi ukuthi lolufa bazolulungisa kanjani.
16 Feb Adoption: Treating Sensory Processing Disorder
24 Feb Finding a Good Marriage Therapist